Ny Fanjakana VAN LANG (2879 talohan'i JK - 258 talohan'i JK, 2621 taona) - Ny Tany Masina amin'ny fandalinana any Vietnam
Once mahatratra Phong Châu, ny dimampolo zanakalahin'i Âu Cơ3 nifidy ny zokin'izy ireo ho mpanjaka ny Tarana Hùng.
Tsatroka no voalohany mpanjaka Hùng izay nanjaka Văn Lang, ny fanjakana vietnamika voalohany. ny Văn Lang, miaraka amin'ireo fetrany tsy marina izay nitarina avy i Vietnam ny Renirano manga4, tsy fantatry ny taloha Jeografia sinoa. Amin'izany, HENRI MASPERO5 dia nanombana fa ny Văn Lang of mpahay tantara vietnamianina, dia ilay fanjakana taloha fotsiny Ye-lang (Dạ Lang), miorina ao atsimon'ny Farihy Tong-T'ing izay namaky ratsy ilay anarana ary naverin'ny diso Mpahay tantara Tang sinoa izay nampita ny, ny hadisoany tamin'izy ireo mpiara-miasa Vietnamianina. Raha ny marina, ny toetra Ye (Dạ) dia mety ho noraisina diso indray Wen (Văn) ary izany no antony nahatonga ny fisavoritahana teo Ye-Lang ary Wen-Lang. Nisy, tamin'ny alàlan'ny fanonerana, a Văn Lang miorina lavitra any atsimo, amin'ny tapany atsimo ankehitriny Central Vietnam; izany ve no izy Văn-Lang izay nosoratan'ny mpanoratra ny Ye-lang ary nihevitra fa ireo fanjakana roa ireo dia iray ihany.
Văn Lang, ny voalohany fanjakana vietnamika, tsy maintsy nibodo faritany voafetra kokoa noho ny an'ny Xích Quỷ. Ny lisitry ny distrika omen'ny tantara sy angano isan-karazany dia tsy misy faritany mifandraika amin'izany Farihy Tong-T'ing6. Ireo distrika roa ambin'ny folo dia tsy mihoatra Kouang-si ary Kouang-tong any Avaratra.
The Văn Lang nanana fisiana lava be. Nifindra teo anelanelan'ny Hùng Kings nanomboka tamin'ny vanim-potoana angano ka hatramin'ny 257 talohan'i JK, datin'ny nampidirin'i by Ny Vương Dương7, andriana an'ny Pa-Chou (Ba Thục).
Tfampahalalana azontsika angonina Văn Lang nalaina avy amin'ny fikambanana politika sy ny fiainana ara-tsosialy Lahatsoratra sinoa, tsy mialoha ny 4th taonjato misy antsika, ary avy Lahatsoratra Vietnamianina vao haingana kokoa (14th taonjato) fa mampita zava-misy sy finoana taloha.
Tizy tsy mahazo aina amin'ny fandrafetana latabatra amin'ny fiainan'ity fanjakana ity dia mitoetra ao amin'ny fahasahiranana manamboatra ny vanim-potoana, na koa ny ampahan'ny taonjato izay ahafahany mitombina. ny Taranak'i Hùng angamba nanjaka nandritra ny arivo taona lasa, raha miaiky ny salan'isa dimam-polo taona isaky ny manjaka isika; raha ny fijerena famintinana kosa amin'ny Ny fiainan'i Văn Lang dia voarakitra ao anaty lahatsoratra miparitaka vitsivitsy sy angano maromaro izay natombok'i HENRY MASPERO. Amin'ny 18 Hùng mpanjaka isaina araka ny fomban-drazana, manana marimaritra iraisana onomastika sy ara-potoana isika.
ANy latabatra ankapobeny dia misy lalambe, azo zahana, ohatra, hatramin'ny taona 1000 talohan'i JK, na 300 talohan'i Kristy. Ankoatr'izay, ny ankamaroan'ireo toetra ireo dia mety an'ny epochs ao aoriana Văn Lang fanjakana ary mety ho nafindra tany aminy tamin'ny mpanoratra vietnamianina amin'ny 14th ary 15th taonjato maro.
The Fanjakana Văn-Lang, raha misy mino ny lahatsoratra, dia fanjakana feodal, voarindra ambaratonga fa manana fanapariahana. Napetraka teo ambanin'ny aulorily a Hung (mahery fo) na (Lạc) mpanjaka izay voafidy tamin'ny voalohany noho ny fahasahiany sy ny herim-pony. Izay aloha Hùng mpanjaka nanjaka tao Phong Châu8, toerana iray misy ankehitriny Bạch Hạc. Izy no lahimatoan'i Lạc Long Quân, razamben'ny Yue zato (Việt) ie ankehitriny vietnamiana, izay mpiaro ny génie tamin'ny tarana vietnamika voalohany ihany koa. Ny voalohany Hùng mpanjaka nizara ny Văn Lang faritany lasa distrika natoky an'ireo rahalahiny izay mety ho Lạc Marquis (Lạc Hầu na sefo sivily).
Tny distrikan'ny fantsom-piaramanidina dia nozaraina ho fehezanteny nankinina tamin'ny rahalahin'ny mpanjaka na tamin'ny olona tao amin'ny fianakavian'ny mpanjakaLạc Tướng Na lehiben'ny tafika). Nantsoina ireo faritany nozanahin'ny Tompony Lạc Điền.
Pasan'ny ublic toy ny mpanjaka, marquis, jeneraly (na sefo) toa nandova. Zanakalahin'ny mpanjaka no nanana ny anaram-boninahitr'i Quan-Lang ary nantsoina ny vehivavy Mệ Nàng or Mỵ Nương9. Nampitahain'ny olona tamin'io rafitra politika io ny fikambanana politika izay mbola misy mandraka ankehitriny any amin'ny distrika afovoany sy avaratry Vietnam Avaratra, indrindra fa Mường10 izay mbola manana ambaratongam-pahefana lova lova, tafakambana eo amin'izy ireo amin'ny fatoram-pitondrantena sy fiandrianam-pirenena. Ny mponin'i Văn Lang nahatratra ambaratonga sivilizasiôna iray. Mandova ny teknikan'ny Xích Quỷ razana, nanatsara azy ireo izy ireo ary namorona razana aza. Mpamboly izy ireo izay nandrehitra afo mba hanadio ny tany, ary angadinomby mba hotezaina. Avy eo izy ireo dia nanao fanazaran-tena nanapaka sy nandoro domohina; namafy izy ireo ary nijinja vary miraikitra sy tsy malama (Jereo ny angano an'i Bánh Chưng). Izy ireo, nahandro ny vary voalohany tao anaty fantsom-bararata, avy eo tonga nampiasa vilany tany sy metaly. Fantatr'izy ireo ny momba ny varahina. Mpanarato sy tantsambo ihany koa izy ireo. Nosokafan-dry zareo ny sarin-dragona tamin'ny sary sy nandoko tamin'ny vatany (voay na alligators), bibilava sy biby anaty rano hafa mba hanome toky fa misy fiarovana mazika amin'ireo biby ireo izay atahoran'izy ireo ny fanafihana. Miaraka amina tanjona iray ihany, dia nanintona ny sambony sy ny sambony ho lohany sy mason'ireo biby goavambe anaty rano izy ireo. Tany am-boalohany no nanaovana ny akanjon'izy ireo tamin'ny fibre vegetal. Nanenona tsihy koa izy ireo. Ny tranon'izy ireo dia natsangana avoavo mbola tsy hitranga amin'ny fanafihana bibidia rehetra. Izy ireo niteraka, araka ny azo antoka Lahatsoratra sinoa, volo lava ao amin'ny chignon tohanan'ny turban. Raha ny angano vietnamiana sasany nananan'izy ireo, ny mifanohitra amin'izany, volo fohy mba "manamora ny diaben'izy ireo any anaty ala be tendrombohitra“. Nampiasa areca-nut sy betel izy ireo. Ny fanamaintisan'ny nify dia tsy voalaza mazava ao amin'ny angano momba ny hazo betel sy areca-nul na angano an'ny Cao (cau) fianakaviana, saingy manam-pahaizana vietnamianina maro no miverina amin'ny vanim-potoana taloha. Tsy maintsy mpivavaka totem izy ireo ary nanao sorona olombelona naharitra hatramin'ny 10th taonjato tamin'ny vanim-potoana iainantsika, ary izany fanao izany dia ho voasakan'ny Mpanjaka Đinh Tiên Hoàng11. Ny fanambadiana teo amin'izy ireo dia toa nalalaka ary natao tamin'ny vanim-potoana proprer. Betela sy areca-voanjo dia nandray anjara lehibe tamin'ny fifanambadiana. Ny fombafom-panambadiana dia nahitana sorona sy fanasana talohan'ny nahavitana azy.
IRaha mino ny angano vietnamianina ny olona iray, tamin'ny andro nanjakan'i Hùng mpanjaka ary angamba tamin'ny faran'ny tarana-mpanjaka dia nisy fifandraisana tsy mivantana naorina niaraka tamin'izy ireo Occident na bebe kokoa amin'ny Ranomasina atsimo. The Angano momba ny melon rano toa mijoro ho vavolombelona ny fahatongavan'ny i Vietnam an'ny vahiny amin'ny firazanana hafa izay tokony hanafatra ireo voa, ary mety an-dranomasina io (3rd taonjato talohan'i JK.?).
1: PIERRE HUARD (16 Oktobra 1901, Bosnia - 28 aprily 1983) dia mpitsabo frantsay (mpandidy sy anatomista), mpahay tantara momba ny fitsaboana sy ny anthropologist, efa ela tany Indochina, dekanà fakiolten'ny fitsaboana maro (Hanoi, Paris), rector an'ny Université Félix Houphouët-Boigny, mpisava lalana amin'ny tantaran'ny fitsaboana. (Jereo daholo ny pitsopitsony: P. HUARD)
2: MAURICE DURAND dia mpandalina ny fiteny frantsay-vietnamiana teraka tany Hanoi. (Jereo daholo ny pitsopitsony: M. DURAND)
3: ÂU CƠ (嫗 姬) dia, araka ny angano noforonin'ny Vahoaka Vietnamese, angano tsy maty vady izay nanambady Lạc Long Quân ( 'Dragon Tompon'ny Lac"), Ary niteraka sac atody izay nahatafiditra zaza zato fantatra amin'ny anarana hoe Bách Việt, razambe ho an'ny Vahoaka Vietnamese. (Jereo daholo ny pitsopitsony: Ã‚U CÆ)
4: Renirano manga: dia midika hoe Reniranon'i Yangtze, indraindray antsoina hoe ny Renirano manga amin'ny loharanom-pahalalana anglisy taloha. ny Yangtze or Yangzi (anglisy: / ˈJæŋtsi / na / ˈjɑːŋtsi /) no renirano lava indrindra (6,300 km # 3,900 mi) ao Asia, ny fahatelo lava indrindra eto an-tany ary lava indrindra eto an-tany mivezivezy ao anatin'ny firenena iray. Miakatra amin'ny Jari Hill ao amin'ny Tendrombohitra Tanggula (Lemaka Tibetana) ary mikoriana 6,300 km (3,900 mi) mankany amin'ny ilany atsinanana mankany amin'ny Ranomasina Chine Atsinanana. Io no renirano fahenina lehibe indrindra ateraky ny fivoahan'ny volon'izao tontolo izao.
5: HENRI PAUL GASTON MASPERO (15/12/1883, Paris - 17/3/1945, Toby fitanana Buchenwald, Alemana Nazia) dia biolojista sy profesora frantsay izay nandray anjara tamin'ny lohahevitra maro mifandraika amin'izany Azia Atsinanana. (Jereo daholo ny pitsopitsony: HENRI PAUL GASTON MASPERO) (Jereo ny antsipiriany rehetra: HENRI MASPERO)
6: Farihy Tong-T'ing or Farihy Dongting (Sinoa: 庭 湖) dia farihy midadasika sy ambany any avaratra atsinanana Faritanin'i Hunan, Sina.
7: AN DƯƠNG VƯƠNG no mpanjaka ary hany mpitondra ny fanjakan'i Âu Lạc, fanjakana antitra fahagola mifototra amin'ny Red River Delta. Amin'ny maha mpitarika ny Foko Viut, resiny ny farany Hùng mpanjaka ny fanjakan'i Văn Lang ary mampiray ny vahoaka ao aminy - fantatra amin'ny anarana hoe Lạc Việt - miaraka amin'ny olony ny Âu Việt. Nisy Dương Vương nandositra ary namono tena taorian'ny ady tamin'ny Hery Nanyue tamin'ny 179 TK (Jereo ny antsipiriany rehetra: NY VƯƠNG)
8: Phong Châu (峯 州, Distrikan'i Bạch Hạc, Việt Trì, Faritanin'i Phú Thọ ankehitriny) dia ilay renivohitry Văn Lang (izao i Vietnam Nam) amin'ny ampahany betsaka amin'ny Hồng Bàng vanim-potoana,1 avy amin'ny Tarana fahatelo ny Tarana fahavalo ambin'ny folo of Hùng mpanjaka.
9: Mỵ Nương (Sinoa: 媚 娘 na 媚 嬝) dia lohateny ampiasaina mandritra ny Hong Bang vanim-potoana manondro ny zanakavavin'ny Hung mpanjaka. (Jereo ny antsipiriany rehetra: MỴ NƯƠNG)
10: Ny Mường (Vietnamianina: Người Mường) na ny Mwai dia foko niaviany Vietnam avaratra. The Muong no vondrona fahatelo lehibe indrindra amin'ny firenena 53 ao amin'ny firenena, miaraka amin'ny mponina 1.45 tapitrisa (araka ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2019). The Olona Muong monina ny faritra be tendrombohitra any Vietnam avaratra, mifantoka amin'ny Faritany Hòa Bình ary ny distrika be tendrombohitra an'ny Faritany Thanh Hóa. Izy ireo dia mifandray akaiky indrindra amin'ny foko vietnamiana (Kinh). (Jereo ny antsipiriany rehetra: MƯỜNG)
11: ĐINH BỘ LĨNH (924–979) (r. 968–979), nomena anarana voalohany Đinh Hoàn (丁 桓 1), no voalohany Emperora Vietnamianina manaraka ny fanafahana ny firenena amin'ny fanjakan'ny Dynasty Han Southern China, ary koa ny mpanorina ny fotoana fohy Đinh Dinastika ary olona manan-danja amin'ny fananganana Fahaleovantenan'i Vietnam ary ny firaisankinan'ny politika tamin'ny taonjato faha-10. (Jereo ny antsipiriany rehetra: DINH TIÊN HOÀNG)
◊ Loharano: Connaissance du Vietnam - P. HUARD. Hanoi, 1954.
◊ Sary: wikipedia.com.
(Visited 1,033 fotoana, 1 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Ny Vondron'olona XINH MUN misy foko etnik 54 any Vietnam
INONA no nandehan'i Frantsa tamin'i Vietnam tamin'ny taona 1857? - Fizarana 2
Comments Off tamin'ny LALANA INONA no nalain'i Frantsa tany Vietnam tamin'ny 1857? - Fizarana 2
GOUJIAN: sabatra Sinoa fahiny izay manohitra ny fotoana (8,447)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (8,403)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (7,056)
Ny vondron'olona Vondron'olona 54 manana foko foko any Vietnam (5,798)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (5,120)
Comments Off amin'ny COCHINCHINA
CHOLON - Cochinchina - Fizarana 1
Comments Off amin'ny CHOLON - Cochinchina - Fizarana 1
Fitsidihana anio: 25
Andro farany 7 nitsidika: 2,331
Total visits: 433,511